Portable Mobile Prefab Weelka House la Musqusha (Container Home) - Shiinaha Qingdao Xinmao ZT Steel
Qaab dhismeedka Meegaarka Steel Dhismayaasha Workshop
Portable Mobile Prefab Weelka House la Musqusha ...
Portable Mobile Prefab Weelka House la Musqusha (Container Home)
Description: guriga weel la qaadan karo qaybsan waxaa loogu tala galay sida ay qaaska ah ee maraakiibta weel sida saxda ah. Waxaa la sameeyey bir iftiin prefab sida jir iyo rooti guddi derbiga iyo saqafka, ka dibna fududeeyey la daaqadaha, albaabada, dhulka, saqafka, iyo accessories kale oo dheeraad ah. Waxay waxaa lagu rakibay leh xoog iyo iftiiminta iyo la accessorized karaa si loo waafajiyo baahidaada. Qaab dhismeedka unit Golaha Xukuumadda ee hordhaca ah ee steel iyo c ...
Guriga weel la qaadan karo qaybsan waxaa loogu tala galay sida ay qaaska ah ee maraakiibta weel sida saxda ah. Waxaa la sameeyey bir iftiin prefab sida jir iyo rooti guddi derbiga iyo saqafka, ka dibna fududeeyey la daaqadaha, albaabada, dhulka, saqafka, iyo accessories kale oo dheeraad ah. Waxay waxaa lagu rakibay leh xoog iyo iftiiminta iyo la accessorized karaa si loo waafajiyo baahidaada. Qaab dhismeedka unit Golaha Xukuumadda ee hordhaca ah ee steel iyo steel qabow-sameeyay wada welded si ay kor qaybaha caadiga ah. Guriga loo qaabeeyay kartaa sidii hal unug ama ku xiran oo dhan ka sanduuqyada dhowr, by la xidhiidha fudud sida geliyeen handarraabbadeedii. Sidaas darteed waa mid fudud oo dhakhso ah in la rakibo iyo disassembled.
Mashruucan wuxuu ahaa helaan in Spain. Waxaa ka buurta iyo baddii ka mid ah, ka fog magaalada buuqa iska. Waxaa ka kooban yihiin 49 weel maraakiibta. design casriga ah ka dhigaysa guriga u muuqataa xarrago leh iyo raaxo leh in ay ku noolaadaan. Haveing ​​fasax ku jira waa in uu ahaado mid aad u raaxo iyo nasasho.
Tani waa makhaayad. Waxaad heli kartaa qaar ka mid ah qaxwada iyo aad cuntada halkan.
20FT / 40FT qaybsan karo Weelka House sooc
size dibadda 6058mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) / 12116mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H)
Golaha geeska steel iftiin Prefabricated
guddi saqafka Dhogor Rock / EPS guddi rooti (sida ay looga baahan yahay qofka macaamilka ah)
Panel Dhogor Rock / EPS guddi rooti (sida ay looga baahan yahay qofka macaamilka ah)
saldhig Ground steel iftiin Prefabricated
Window PVC saraysa daaqadaha ama suuqa kala daawaha aluminium ama suuqa kala steel caag ah
Door Guddi rooti Streel ama albaabka guddi rooti jir aluminium.
Saqafkii been ah PVC saqafka
sys korontada 2 nalalka & 1 biiro
accessories optional Alaabta guriga inta nool guryaha, xafiiska, kuleejo, musqusha, jikada, Musqusha, Maydho, iwm
Codsiga Ku noolaanshaha guriga, xafiiska, kuleejo, garaash, dukaan, waab, dukaan, qolka shirka, makhaayadda, iwm
aragti kartoo waa la soo dhaweynayaa.
(1) loading isu iyo gaadiidka
Mid ka mid ah 40FT HC load 2 qaybood shiriyey weelka la dimension- 5850mm * 2250mm * 2500mm
(2) Flat-pack gaadiidka:
Qorshaha A: load One 20FT GP 4 qaybood 20 feet guryaha weel
Plan B: Mid ka mid ah 40FT load HC 8 dhigaya 20 feet guriga weelka ama 4 qaybood 40 feet guriga weelka.
All darfaha la ilaaliyo oo la film PE, iyo qaab-dhismeedka steel qalloocan oo suun dhar. Accessories la buuxiyey doonaa sanduuqa waraaqaha ama bacaha balaastikada ah. Daaqadaha iyo albaabada loo buuxiyey doonaa sanduuq alwaax.
Qingdao Xinmao ZT Steel Dhismaha Co., shirkadda Ltd waa mid ka mid ah shirkadda si fiican-la aasaasay khibrad iyo takhasus ee soo saarta guryo kala duwan prefab iyo guryaha weelka la tayo wanaagsan iyo qiimaha tartan rasmi ah. La aasaasay sannaddii 2003 In ka badan 50 R & D shaqaalaha iyo in ka badan 400 oo shaqaalaha na taageeraan si ay u helaan saamiga suuqa weyn. Shirkadda Our helay shahaadada tayada caalamiga ah ee ISO9001 iyo Qaabdhismeedka Steel Dhismaha Qualification Certificate Grade II.
20 Flat Pack Weelka House
40ft Shipping Weelka House
Shiinaha Weelka House
Weelka House 40 Ft
Weelka House Shiinaha
fideysa Prefab Weelka House
Flat Pack Cheap Weelka House
Flat Pack Weelka House Waayo, Sale
Flatpack Weelka House
Flatpack Living Weelka House
High 20ft Tayada Weelka House
Wax kabadal Shipping Weelka House
Ocean Shipping Weelka House
Prefab Sea Weelka House
Shipping Weelka House
Shipping Container Golaha Building
Shipping Weelka House Waayo, Sale
Solar Weelka House
Dhulka hoostiisa mara Weelka Gole
20 FT kabadal Shipping Weelka Gurigayga Sin ...
Rakibaadda Site Prefabricated Shipping Contai ...
Flat Pack 20FT Weelka House la Jikada, Wa ...
Smart Prefabricated Mobile Shipping Weelka H ...
Sandiwiij Modern Panel Flat Dhaqaalaha Pack Prefab ...
Prefab Prefab Flat Pack Weelka Gurigayga Ind ...